အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇
Posted by kai on May 5, 2017 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 16 comments
Bold News May 2017
Stephen Hawking warned that humans must colonize another planet or face extinction.
In his upcoming documentary “Stephen Hawking: Expedition New Earth”, the physicist says Earth is becoming “increasingly precarious” because of threats from epidemics and asteroids.
Hawking joins the likes of Elon Musk and Jack Ma in warning about the dangers of new technology.
Humans need to colonize another planet within 100 years or face the threat of extinction, high-profile physicist Stephen Hawking has warned.
Inanew BBC documentary called “Stephen Hawking: Expedition New Earth” set to air later this year, the professor will “present his predictions that the human race only has 100 years before we need to colonize another planet,”apress release from earlier this week said.
Previously, Hawking theorized that humanity probably has around 1,000 years left before it becomes extinct. His timeline appears now to have shortened. The famous physicist has issuedanumber of warnings about the future over the past few years.
At the start of 2016, Hawking warned about the dangers from nuclear war, global warming, genetically-engineered viruses and artificial intelligence (AI).
Vatican and Myanmar agree to establish diplomatic ties
VATICAN CITY — The Vatican and Myanmar formally agreed Thursday to establish full diplomatic relations, the Vatican announced, confirming an accord that is the latest step in the country’s rehabilitation by the international community.
The Vatican said it would appointapapal nuncio to Yangon and that the government of Myanmar would open an embassy at the Vatican.
The announcement came just after State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi met Pope Francis on the latest leg ofaEuropean tour overshadowed by last year’s security crackdown in Rakhin State.
Pope Francis has spoken out in the past on behalf of the Rohingya while Aung San Suu Kyi has come under fire for not condemning repression of the minority group by her country’s security forces.
She andasmall group of officials spent around 20 minutes in Thursday’s audience with the leader of the world’s 1.3 billion Catholics.
ဦးဝင်းထိန်၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် တပ်မတော် တုံ့ပြန်
By ဧရာဝတီ5May 2017
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဝင်းထိန် သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ၌ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရာတွင် တပ်မတော်အပေါ် အခြေအမြစ်မရှိ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုသည်ဟုဆိုကာ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပြီး လိုအပ်သော တုံ့ပြန်မှုများ ဆောင်ရွက်မည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် NLD ပါတီနှင့်ပတ်သက်သော အွန်လိုင်းပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေသည့် သတင်းများအား မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရာတွင် ဧရာဝတီသတင်းဌာနက “ယခုကဲ့သို့ သတင်းမှားများကို မည်သူ၊ မည်သည့်အဖွဲ့များကို သံသယရှိပါသလဲ” ဟုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ရာ ဦးဝင်းထိန်က “ဘယ်သူတွေကို သံသယရှိလဲဆိုတာ ပြောရခက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြားနေရတာတွေက အများကြီး။ ကြံ့ခိုင်ရေးကပဲ လုပ်သလား။ အချို့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲ လုပ်သလား။ ကျွန်တော်တို့ကို မလိုလားတဲ့ အိုင်တီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကပဲ လုပ်သလားမှန်းဆရခက်တယ်” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြေကြားချက်သည် NLD ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးအနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ထိခိုက်စေသော နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော် အပေါ် အခြေအမြစ်မရှိ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုအား ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေကြောင်း၊ လိုအပ်သော တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆိုတော့…. အမေစုက သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်များအဖြစ်….
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ နေရာတွေကို သွားပြီး… ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းမှုတွေ သွားလုပ်နေချိန်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ တော်ဝင်အိမ်ရှေ့စံဝေလမင်းသားချားစ်၊ ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘတ်တို့နှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
လန်ဒန် မေ ၅
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ တရားဝင်ခရီးရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ တော်ဝင်အိမ်ရှေ့စံဝေလ မင်းသားချားစ် နှင့် ကြင်ယာတော်မင်းသမီး Duchess Cornewallတို့နှင့်ယနေ့ ဒေသစံ တော်ချိန်မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် Clarence House၌ ရင်းနှီးခင်မင်စွာ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘတ် နှင့် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် Buckingham နန်းတော်၌ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘတ်က ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
ဟူးးးးးးး တော်သေးရဲ့ ဆိုပဲ..။
Updated 2:11 AM ET, Mon May 8, 2017
Paris (CNN)A fiery dance party broke out in the French capital on Sunday night as Parisian voters celebrated the victory of their new president, Emmanuel Macron.
Thousands gathered in front of the Louvre, waving the tri-colored flag as they embraced one another underablazing soundtrack of pop music among scantily clad dancers and neon laser lights.
The set was perhaps unconventional forapresidential victory party — but then again, this was no ordinary election — nor an ordinary electorate.
Jared Kushner’s family hawking U.S. green cards to rich Chinese under EB-5 investment program
POSTED AT 3:31 PM ON MAY 7, 2017 BY ALLAHPUNDIT
For cripes sake. The point of Trump’s populist revolution was not to enrich the Kushner family by trading precious American immigration privileges for filthy lucre.
It was to enrich the Trump family. Eyes on the prize, people.
လူတယောက်ထုတ်တဲ့.. စာတစောင် ။
Trump’s letter firing FBI Director James Comey
Updated 7:17 AM ET, Wed May 10, 2017
By THE IRRAWADDY 11 May 2017
RANGOON — Burma’s largest private bank, KBZ, has hiredabanking expert to act asaspecial advisor to the bank’s chairman U Aung Ko Win.
The announcement from KBZ on Thursday said special advisor Mike DeNoma was also appointed chief executive officer of the bank while the KBZ heiresses executive directors Daw Nang Lang Kham and Daw Nang Kham Noung had been promoted to deputy CEOs along with senior managing director U Aung Kyaw Myo.
May 13, 2017 @ 02:19 AM 22,870
A ransomware variant called WanaCrypt0r 2.0, also known as WanaCry or WCry, has locked up over 75,000 computers in 99 countries in the last 24 hours according to cybersecurity company Avast. The National Health Service in the UK, Spanish telecommunications company Telefónica, and FedEx in the US are among the tens of thousands of victims. Here’s how you can protect yourself.
the club of nuclear states တဲ့..။
Russia warns against ‘intimidating’ North Korea after its latest missile launch
By Amanda Erickson May 15 at 12:40 PM
Russian President Vladimir Putin is urging foreign leaders to keepacool head on North Korea.
Speaking in China, Putin condemned North Korea’s latest missile launch as “dangerous.” But he also cautioned against “intimidating” the country, comments almost certainly directed at Washington.
“I would like to confirm that we are categorically against the expansion of the club of nuclear states, including through the Korean Peninsula,” Putin told reporters. “We are against it and consider it counterproductive, damaging, dangerous.”
တာ့ခ်၊ တရုတ်သည် ဗမာဖြစ်သည်။
Turkey, Mongolia joining Asean? Duterte: Why not. Suu Kyi: What?
By Elijah Felice Rosales – MAY 16, 20170467
President Duterte on Tuesday said Turkey and Mongolia expressed interest in becoming part of the Asean,aproposal that dumbfoundedaprominent Asean leader.
“I hadatalk with [Turkish] President [Tayyip] Erdogan and [Mongolian] Prime Minister [Jargaltulgyn] Erdenebat; gusto nila magsali sa Asean [they want to join the Asean],” Duterte told reporters upon his arrival in Davao City. “And since I am the chairman [of the Asean], they wanted me to sponsor their entry, and I said: ‘Why not?’”
However, Myanmar State Counselor Aung San Suu Kyi is unimpressed by Turkey and Mongolia’s plea, as she finds the inclusion strange. From the Philippine standpoint, Ankara is 8,827 kilometers away from Manila, while Ulaanbaatar is 3,917 km off the capital.
“Have you considered the physical—the geography—whether they are part of the Asean or not?” Duterte said, quoting the Burmese leader’s remark on the bizarre proposal.
ကျောက်စိမ်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်များ ဆိုတဲ့ Global Witness ရဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကို ရန်ကုန်မြို့က Park Royal ဟိုတယ်က တားမြစ်တာကြောင့် ပြသမယ့် အစီအစဉ်ပျက်သွားပါတယ်။ ရန်ကုန် အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရှိလို့ ပြသခွင့် မပေးနိုင်ဘူးလို့ ဟိုတယ်က ပြောပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေ တကယ်တန်း ညွှန်ကြားခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျ မသိဘူးလို့လည်း Global Witness က ပြောဆိုပါတယ်။ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ပြသခွင့် တားမြစ်ခံရပေမယ့် အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတိုကို ဒီကနေ့ တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခွင့်ရရှိ
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးက သဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ UPDJC အစည်းအဝေးမှာ သမိုင်းဝင်သဘောတူချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းခွင့်ကို သဘာတူခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေး က ပြောပါတယ်။
“ဒီကနေ့အစည်းအဝေးရဲ့ ထူးခြားချက်က ကျနော်တို့ သမိုင်းဝင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ သမိုင်းဝင် သဘောတူညီချက်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ ခေါင်းစဉ်အားလုံပေါင်း ၆ ခုရှိပါတယ်၊ အချက်ပေါင်း ၂၁ ချက်ရှိပါတယ်၊ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေဖြစ်ပါတယ်၊ တကယ်ကို ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တခါမှမရှိဘူးတဲ့ သဘောတူညီချက်ပေါ့နော်၊ ဥပမာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ နောက်တစ်ချက်က တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေ ထားရှိဖို့၊ ဒါကိုအကုန်လုံးက သဘောတူညီတယ်၊ တကယ်လည်း ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်၊ လာမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဟာ တကယ်ကို သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”
အဲဒီလို ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင် မူလတည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေမျိုးဖြစ်အောင် ရေးဆွဲကျင့်သုံးသွားရမှာဖြစ်ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောပါတယ်။
မဘသ မှသည်… ဓမ္မဝံသာနုရက္ခိတ အသင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နာမည်ပြောင်းပြီ..။
မဟန အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အချက်လေးချက်မှာ အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး မဘသအဖွဲ့ အစည်း အမည်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ မဘသအဖွဲ့အစည်း အမည်ကို မသုံးစွဲဖို့ ၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စိုက်ထူထားတဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး မဘသ အဖွဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့အပြီး ဖြုတ်သိမ်းဖို့နဲ့ အဲဒီ အချက်နှစ်ချက်ကို မလိုက်နာတဲ့ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၂၀/၉၀ နဲ့ အရေးယူမှာဖြစ်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ အရေးယူရန်နဲ့ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အမြန်ဆုံး ရေးယူဆောင်ရွက်ပေး ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ မဘသ အမည်ကို သုံးစွဲလုပ်ဆောင်တာတွေ မလုပ်ဖို့နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး မှာရှိတဲ့ မဘသ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာအပြီး ဖြုတ်သိမ်းဖို့ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယက အဖွဲ့ သတ္တအကြိမ်၄၇ ပါးစုံညီ ပဉ္စမအထူး အစည်းအဝေးကနေ အချက် ၄ ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Bitcoin’s price has the potential to hit over $100,000 in 10 years, which would marka3,483 percent rise from its recent record high, an analyst who correctly predicted the cryptocurrency’s rally this year told CNBC on Tuesday.